ရောင်းမည် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း - Monoplace Multiplace Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးကုန်သည်ကြီးများအသင်းထုတ်လုပ်သူ HBOT
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Hyperbaric ဆေးခန်း
ရောင်းမည် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း - Monoplace Multiplace Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးကုန်သည်ကြီးများအသင်းထုတ်လုပ်သူ HBOTteknamfg2018-08-01T07:38:41+00:00
ရောင်းမည် Hyperbaric ကုန်သည်များ - Tekna Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး HBOT များအတွက် Monoplace နှင့် Multiplace Hyperbaric ကုန်သည်များ၏ဦးစီးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်
A, B, C ကိုစနစ်များ
ASME / အမျိုးသားဘုတ်အဖွဲ့
class A, B, C က
Class A, B,
Monoplace Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
ရောင်းမည် Monoplace ကုန်သည်ကြီးများအသင်း & Models
Hybrid ကို 4000 Monoplace
Hybrid ကို 3200 Monoplace
Monoplace Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး (HBOT) ကုန်သည်များ 3.0% ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်အောက်ဆီဂျင်နှင့်အတူ 100 လေထုအထိဖိအားနေကြသည်။ အဆိုပါလူနာမှာလည်းတစ်ဦးက Air လူငယ်များသို့ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်တစ်မျက်နှာဖုံးစနစ်မှတစ်ဆင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် Air ကိုရှူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Tekna Monoplace ကုန်သည်များစျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်သောအလုံခြုံဆုံးနှင့်အများဆုံးအဆင်ပြေအခန်းများယနေ့ဖြစ်ကြ၏။ Tekna ကုန်သည်များစစ်ဆင်ရေးနှင့်လူနာစိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုမတူနိုင်တဲ့လွယ်ကူခြင်းကိုဆက်ကပ်။ သငျသညျ Hyperbaric ဆေးပညာကျင့်သုံးပါလျှင်သင် Tekna အမှတ်တံဆိပ်အခန်းများ၏အားသာချက်များမှာအနီးကပ်ကြည့်ယူသင့်ပါတယ်။
Tekna Monoplace Hyperbaric ၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
ရောင်းမည်အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးကုန်သည်များ။ Tekna Monoplace ကုန်သည်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
Multiplace Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
ရောင်းမည် Multiplace ကုန်သည်ကြီးများအသင်း & Models ။
မော်ဒယ် 6000 SL Multiplace
မော်ဒယ် 6000 DL Multiplace
မော်ဒယ် 7200 SL Multiplace
မော်ဒယ် 7200 DL Multiplace
မော်ဒယ် 8400 DL Multiplace
Multiplace Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး (HBOT) ကုန်သည်များဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် Air လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူ 6.0 လေထုအထိဖိအားနေကြသည်။ အဆိုပါလူနာတစ်ဦး hood ကိုသို့မဟုတ်မျက်နှာဖုံးစနစ်မှတစ်ဆင့် 100% ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်အောက်ဆီဂျင်ကိုရှူရှိုက်။
အဆိုပါ Tekna Multiplace ကုန်သည်များစျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်သောအလုံခြုံဆုံးနှင့်အများဆုံးအဆင်ပြေအခန်းများယနေ့ဖြစ်ကြ၏။ Tekna ကုန်သည်များစစ်ဆင်ရေးနှင့်လူနာစိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုမတူနိုင်တဲ့လွယ်ကူခြင်းကိုဆက်ကပ်။
Tekna Tekna Multiplace ကုန်သည်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဒီနေရာကို Sale.Click များအတွက် Multiplace Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးကုန်သည်များ၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
ရောင်းမည် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း!
သငျသညျရောင်းမည်ရုံ Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးကုန်သည်ကြီးများအသင်းထက်ပိုမိုရှာဖွေနေပါသလား?
Tekna ရုံအခန်းများကိုရောင်းချထက်အများကြီးပိုပါဘူး။ Tekna, Hyperbaric ဆေးပညာ၏နယ်ပယ်များတွင်ပေါင်းစပ် Hyperbaric သုတေသနနှင့်အသိပညာ၏ 100 နှစ်ကျော်ရှိပါတယ် Hyperbaric ကုထုံးနှင့်အောင်မြင်သော Hyperbaric ဆေးခန်းစစ်ဆင်ရေး။ သငျသညျသေးငယ်တဲ့ဆေးခန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြီးမားသောဆေးရုံရောက်နေတယ်ဆိုရင်ငါတို့သည်သင်တို့၏ Hyperbaric ကုထုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
Tekna, Hyperbaric ဆေးခန်း Layout များ, Hyperbaric အောက်ဆီဂျင် Layout များ, Connection ကိုဆွဲပုံများ, အဆောက်အအုံ Code ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များနှင့်မီးသတ်မာရှယ်လေးစားလိုက်နာခြင်း၏ပွိုင့်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဆိုက်ကိုသင့်လျော်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပါအဝင် Pre-ရောင်းအားလေယာဉ်ပေးထားပါတယ်။
Tekna Professional ကသွတ်သွင်း, တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့စမ်းသပ်ခြင်းကမ်းလှမ်းနှင့် Tekna ကုန်သည်ကြီးများအသင်းသင်၏တိကျတဲ့မော်ဒယ်အပြီးအစီးစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်ရေး။
Tekna ကိုလည်းသင်၏အ Tekna HBOT ကုန်သည်ကြီးများအ�